UNWTO bụ nke odeakwụkwọ ukwu: Echefuola na ntụgharị asụsụ?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO bụ nke odeakwụkwọ ukwu: Echefuola na ntụgharị asụsụ?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Marrakesh, Madrid, ma ọ bụ Nairobi - nke a bụ ajụjụ. "Aga m eme ka ị mara ozugbo anwụrụ ọkụ na-acha ọcha," bụ nzaghachi nye ya eTurboNews site n'ọnụ onye na-ekwuchitere onye ozi a ma ama na-etinye aka na mkparịta ụka nke mgbanwe ebe maka Mgbakọ UNWTO na-abịa.
Ụbọchị atọ gara aga, Secretary nke United Nations World Tourism Organisation kwupụtara mgbanwe nke ebe mgbakọ 24 na-abịanụ.th Oge nke Mgbakọ Ozuruọnụ, nke a ga-eme na Marrakesh, Nọvemba 30 - Disemba 3, 2021
Ụlọ ọrụ odeakwụkwọ, mgbe ọ gbasasịrị onye isi oche nke Executive Council na Gọọmenti Spain agwala ndị otu na ebe ọhụrụ ga-abụ Madrid, n'otu ụbọchị ahụ.
Najib Balala, odeakwụkwọ nke njem nlegharị anya na Kenya ụnyaahụ kpọrọ UNWTO ka ọ mee Mgbakọ Mgbakọ nke 2021 na Kenya.
Mgbakọ na-esote nke World Tourism Organisation (UNWTO) nwere ike bụrụ nzụkọ kacha mkpa nke ụlọ ọrụ UN nwere mmekọ nwere.
Marrakesh, Madrid ma ọ bụ Nairobi, na mgbe?
Nzukọ a ka ga-ewere ọnọdụ na Nọvemba 30 ma ọ bụ n'oge ọzọ?
Nzukọ a ga-eme na Morocco n'oge ọzọ ma ọ bụ na November 30 na Spain ma ọ bụ Kenya?
Asụsụ e Secretary 'lọ dede ụbọchị n’ụbọchị October. Ọ dị ka akụkụ nke akwụkwọ ozi a nwere ike furu efu na ntụgharị asụsụ.
Ọgụgụ nke nzikọrịta ozi Gọọmenti Morocco kwesịrị ịjụ ma ọ bụrụ na nsonaazụ ezi uche dị na ya bụ n'ezie arịrịọ maka mgbanwe dị mfe ebe site na Marrakesh gaa Madrid?
Gburugburu ụwa pụtara zuru ụwa ọnụ, na ọnọdụ COVID-19 zuru ụwa ọnụ ugbu a anaghị agbanwe ma ọ bụrụ na mmadụ ele ya anya na Morocco ma ọ bụ n'echiche Spain.
Mana enwere isi okwu dị aghụghọ nke na-enye echiche na ndị odeakwụkwọ, n'ihi ihe ụfọdụ a na-eche n'ụzọ dị mfe, ma ọ bụ kpachapụrụ anya gbagọọ nzikọrịta ozi nke Gọọmenti Moroccan.
Ọ bụrụ na etinyere nkọwapụta nke oge ma ọ bụ ebe ma ọ bụ ha abụọ na nzikọrịta ozi a, Gọọmenti Moroccan na-arịọ ka a gbanwee ebe a ga-abụ nke ziri ezi.
Agbanyeghị, n'onwe ya, akwụkwọ ozi gọọmentị Morocco zitere nwere ike ọ pụtaghị ịrịọ maka ịkwaga obodo, mana arịrịọ dị mfe ka yigharịrị ọgbakọ izugbe nke edere n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị French.
N'ezie, o siri ike ikwenye na n'ọnọdụ ụwa ugbu a nke ọrịa na-efe efe ọ ga-eme ka ọ bụrụ na Madrid ma ọ bụ Marrakesh site na nchekwa na nchekwa.
N'agbata Ọktọba 18 na 22, Spain debara aha ikpe ọhụrụ 13,346, ya bụ, nkezi kwa ụbọchị nke 57.13 kwa nde, ebe n'otu oge ahụ, na Morocco, ikpe ọhụrụ bụ 1,350, ya bụ nkezi kwa ụbọchị nke 7.49 kwa nde, nke ji okpukpu asatọ na-erughị. .
Comunidad de Madrid na-ebipụta akụkọ kwa izu banyere ọrịa a. Nke ikpeazụ na-ezo aka n'izu Ọktoba 11-15 wee debanye aha kwa ụbọchị nke ikpe ọhụrụ 44.4 kwa nde. Nke ahụ maka izu na-esote ka ebipụtabeghị, mana data zuru ụwa ọnụ na Spain edebanyela mmụba nke 13%.
Na Morocco, data Marrakesh mpaghara dị ntakịrị, n'usoro nke nkeji ole na ole kwa nde.
na eTurboNews akụkọ sitere na ụnyaahụ, a tụrụ aro na ngbanwe nke ebe ahụ bụ ihe ọzọ onye odeakwụkwọ ukwu nke ugbu a mere, onye mkpọsa ntuli aka ya kpalitere ihe karịrị otu anya n'etiti ndị maara ụkpụrụ omume UN.
Nzukọ izugbe ga-abụ ebe a ga-emechi nkwenye maka votu ndị UNWTO Executive Council nyere iji họrọ SG dị ugbu a maka afọ 2 ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ndị otu mba nọchitere anya na Mgbakọ General site na ndị nnọchi anya ha na Madrid ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ihe ngosi, nyocha nke eTurboNews akụkọ ga-abụ nke ziri ezi.
Otú ọ dị, ọ bụchaghị otú ahụ. N'asụsụ Spanish, ahịrịokwu a na-ejikarị eme ihe bụ "Le salió el tiro por la culata" ikekwe na-egosipụta karịa nsụgharị Bekee "mgbara azụ azụ".
Morocco egbochila ụgbọ elu si mba dị iche iche na-abata. Nke a abụghị ikpe maka Spain. Spain bụ otu n'ime mba Europe ole na ole na-enye ohere ịbata na-enweghị iche iche maka ndị agbachara ọgwụ mgbochi.
Ma nke a ga-eme ka mmeghachi omume sitere na mba ndị e wepụrụ site na oke ọrụ njem nke odeakwụkwọ ukwu nke ugbu a n'ime afọ tupu ntuli aka nke Executive Board bụ ihe a na-atụghị anya ya mana enwere ike. Ikike nke mba Arab, Africa na obere Latin America ga-emetụta ya.
Ọ nwere ike ịmasị gị nyochaa usoro nke mgbanwe ebe.
Okwu mbụ gbasara oge: Na Nọvemba 2020 World Bank IMF na Gọọmenti Morocco kpebiri yigharịrị nzukọ kwa afọ IMF otu afọ. Emebere ya ugbu a maka Ọktọba 2022 na Marrakesh.
N'oge mgbanwe, ikpe COVID kwa ụbọchị na Morocco na Spain ji okpukpu iri karịa ugbu a. Nke a emeghị ka UNWTO nwee nchegbu ọ bụla.
N'ime oge ahụ isiokwu nke odeakwụkwọ ukwu lekwasịrị anya n'ihe ọtụtụ ndị chere na ọ na-enyo enyo. Ndị isi oche zutere n'oge ajọ ntiwapụ nke COVID-19 na ọdachi ihu igwe. Ndị Candidates dị njikere ịgba Zurab aka enweghị oge iji nyefee akwụkwọ n'ụzọ ziri ezi ma jide ya na mberede.
Ndị nnọchi anya kansụl Executive nke kpochapụrụ Zurab maka oge nke abụọ bụ ụfọdụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ nnọchite anya mba ụwa mana ọ bụ ezie na ọ nweghị ndị na-eme ntuli aka (Ndị Minista)
Nke abụọ bụ isi ihe teknụzụ.
Nkwuputa nke UNWTO Secretariat na-ekwu na ozi nke ebe ọhụrụ maka GA bụ "N'ikwekọ na ikike nke e nyere n'okpuru Ntuziaka maka nhọrọ nke ebe maka nnọkọ nzuko nke General Assembly nakweere site na mkpebi 631 (XX)" .
Ọ bụrụ na anyị na-ezo aka na ederede nke mkpebi 631 (XX), dị na Weebụ, echiche nke ndị nnọchiteanya dị otú ahụ adịghị. Ikekwe ndị odeakwụkwọ nwere ike na-ezo aka na edemede 8.2 nke ụkpụrụ, ọ bụrụgodị na ihe I.7 nọchiri ya.
Mba United Nations ga-esiwanye ike, a ga-ewepụtakwa ụzọ ka mma maka mkpesa.
Nkatọ nke WHO, enweghị ike nke WTO ịzaghachi arịrịọ India na South Africa ka ewepụtara ikike ikike ịgba ọgwụ mgbochi n'oge ọrịa a, bụ ebumnobi egwu.
Njem nlegharị anya bụ otu n'ime isi akụ akụ na ụba maka ọtụtụ mba, ọkachasị mba ndị na-emepe emepe. Òtù UN ya kwesịrị ka a na-ahụ maka ya nke na-eme mkpebi bụ ihe a na-aghọta nke ọma ma na-erube isi n'iwu, ọ bụghị ikwu ihe doro anya.
N'iburu n'uche echiche ndị dị otú ahụ, ọ pụghị ịbụ ihe ijuanya na ụwa na-anabata ma na-eto nkwupụta mmesapụ aka ozugbo nke Kenya na-akwado Ụlọ Nzukọ Ọchịchị n'ọnwa na-abịa.
Kenya nwere otu n'ime ọnọdụ COVID-19 kachasị dị ala, 1.73 kwa nde n'ime ụbọchị asatọ gara aga, ma na-anabata ụlọ ọrụ UN abụọ kachasị mkpa, na, nke ikpeazụ, mana opekata mpe, a ga-asọpụrụ ụkpụrụ nke ntụgharị mpaghara.
World Tourism Organisation esoghị na odeakwụkwọ ukwu. Ọ bụghị ya dịịrị ịnara, jụ ma ọ bụ leghara arịrịọ Kenya anya
Ọ ga-agbaso ngwa ngwa ọnọdụ ahụ chọrọ usoro nke Secretariat kwuru na ọ gbasoro na nzikọrịta ozi izu ụka ikpeazụ ya, nke mkpebi ahụ e kwuru n'elu kwuru.
Ya mere, a na m atụ anya na ozugbo UNWTO ga-agwa Kenya ihe ọnọdụ ga-ekwe ka Nairobi bụrụ onye ọbịa nke Mgbakọ Ọchịchị na-esote.
Air Canada na-agbakwunye ike na Vancouver
Ndị njem nlegharị anya China na-alọghachi? Akuko isi okwu...
Udo Site Njem Nleta Ugbu a - Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị